ဘယ်လိုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး Build သလော - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
အလုပ်လုပ်နေနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏, ငါလူမျိုး, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Aspire, အလုပ်လက်မဲ့လူငယ်အပေါ်အမြဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်, ပိုလတ်ဆတ်ရဲ့မေးပါ - သူတို့ကယောဘသို့မဟုတ်အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာနေရှိမရှိ? "ယောဘ" သငျသညျတခုရုံးသွားသို့မဟုတ်ကန့်သတ်အချိန်ဘောင်နှင့်သင်အတူတူလုပ်နေကြနှင့်များ၏အစားအချို့ကိုသင်ပိုက်ဆံရနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ "အလုပ်ရှာဖွေရေး" သင်ပျော်မွေ့သောအလုပ်ကိုလုပ်နေတာနဲ့ကဆုလာဘ်ရတဲ့နှင့်သင်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ကျနော်တို့မှာအများကြီးကြီးထွားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုငါပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါအလုပ်ကိုချစ်နဲ့ကျွန်မအတူတူပင်တစ်အနေအထားကိုတည်ဆောက်ချင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်သင်တန်းအမှတ်စဥ် အများအပြား enterpreneurs ၏ဘဝအသက်တာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာလောကရှိ, သင်အလုပ်လုပ်ပေးသို့မဟုတ်အတိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လွယ်ကူသောမူသောသင်တို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်။ အတွက်ကြောင့်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာက ကျနော်တို့ကကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကြီးမားသည့်ဒေတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ သင်တစ်ဦးအလုပ်လက်မဲ့လူငယ်များမှာလျှင်, အိမ်ရှင်မ, ကောလိပ်ကျောင်းသား, စျေးဆိုင်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်သွားသင်န်ဆောင်မှုများရောင်းချသို့မဟုတ်ပေးတပ်ဆင်ထားတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Flipkart န်ထမ်းများနှင့်ကန့်သတ်န်ဆောင်မှုများ၏စည်းနှင့်အတူ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး - ယခု 30000 န်ထမ်းများနှင့်ရူပီး၏လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရှိသည်။ 15,129 ကုဋေ, သူတို့ရိုးရိုးဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာမှတဆင့်ကုန်စည်ရောင်းချနေကြသည်။ ဘလော့ဂ်များ - www.labnol.org နှင့်ရူပီးငွေအပေါ်ဖြစ်သူ Amit Agrawal ထုတ်ဝေဘလော့ဂ်များ။ သာသည်သူ၏အိုင်တီနည်းပညာဘလော့ဂ်များမှတဆင့်တလလျှင် lacs 20 မှ 30 lacs ။ ဒါဟာတဦးတည်းကိုသိသောဥာဏ်မျှဝေခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေနိုငျသောဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။
ဒါကြောင့်သင်ထားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘတ်စ်ကားလက်လွတ်လျှင် - ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ဆန်းသစ်သောနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ဆိုလိုသည်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်း join ဖို့သငျသညျကမ်းလှမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ပြေး, သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်စီစဉ်နိုင်သောဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာအသိပညာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများဘို့အစီအစဉ်နှင့်အတူသင်တို့သည်ဤမျှအစွမ်းထက်စေပါလိမ့်မည်ကိုသိမ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်သင့်ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်များအတွက်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, facebook, Instagram ကို၏ထုတ်ဝေ post မှတစ်ဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးပှား။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကျနော်တို့အိမ်ကချမှတ်သူများနားလည်သောကြောင့်, သင်သည်သင်၏အခွက်တဆယ်ဖြုန်းရန်မလိုပါမိသားစု, ကလေးတွေ, အိမ်တာဝန်နှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ဝတ္တရားများလုပ်ပေးပေမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျမစိုးရိမ်အိမ်ရှင်မ (အိမ်ရှင်မများအတွက်အလုပ်အကိုင်များ, အိမ်ကနေအလုပ်) အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် , ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်းကသင်တစ်စုံတစ်ယောက်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောအားဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသိပညာဆည်းပူးဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရန်နိုငျသညျ, သငျသညျ, ကလေးတွေသင်တို့၏ဘာသာရပ်အပေါ်အချို့သောအသေးစားသင်ခန်းစာများဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လို, အစားအစာအပေါ်ဘလော့ဂ်များရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဘို့ဒီတော့သင်သည်အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည် - ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်း နှင့်သင့်အခွက်တဆယ်ကိုသင်၏မိသားစုမှတစ်ဦးဝင်ငွေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြသပါ။
ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် / လုပ်ငန်းရှင်များ / ကို start up - အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေစျေးကွက်အပေါ်ရွယ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသူတို့မှန်ကန်သောလုပ်နေတာသို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်, သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုခြေရာခံဖို့ဘယ်လိုမိမိတို့အဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်လုပျနိုငျတဲ့သူကိုငှားရမ်းဖို့ဘယ်သူကိုလာ, ငါမဆိုအကျိုးရှိရတဲ့သို့မဟုတ်မဖြစ်ကြောင်းကို - ဟုတ်ကဲ့, အဲဒီမှာဤမျှလောက်များစွာသောအဖြေမရတဲ့မေးခွန်းများမှာစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလို - ပဲသင်၏အချိန်ကနေနာရီအနည်းငယ်နှမြောခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူသင့်လုပ်ငန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များအတွက်မည်သည့်နည်းဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
အလုပ်လက်မဲ့လူငယ် - ကွန်ပျူတာများကိုအမြဲတမ်းအကျိုးအမြတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ဒီဂရီအတွက်ကွန်ပျူတာများကိုလေ့လာဘဲ, ဒါကြောင့်စိတ်ပူဖို့မလိုအပ်သည့်အခါပြဿနာကိုကြွလာ - သငျ BA, BCOM နဲ့တူမဟုတ်သောကွန်ပျူတာများဘာသာရပ်များလေ့လာနေလျှင်, BSc နှင့်နေဆဲကွန်ပြူတာအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ရန်လိုလားကျနော်တို့ကဒီမှာ, သင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုရှာဖွေနေကြသူလစ်လပ်လဲလျောင်းအလုပ်၏ 1000s ကျွန်တော်တို့ရဲ့ join ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်း ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်တိုးတက်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည်။
BBA / MBA ဘွဲ့ရ / စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်လုပ်ကိုင် - သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုများအတွက်အဆင်ပြေဖို့ဘယ်လိုခက်ခဲ, ထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းပြဖို့ဘယ်လိုခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာပူပြင်းတဲ့ခဲ generate ရန်ခက်ခဲသည်မည်မျှသိနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ PowerPoint, တင်ပြချက်များ, အီးမေးလ်, အအေးခေါ်ဆိုမှု, တံခါးကိုအသုံးပြုရမည်သေချာ တံခါးကိုစျေးကွက်မှ, လမ်းဒီတော့ခက်ခဲပြသထားတယ်, ကြှနျုပျတို့သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်ဘယ်သူလဲသိသေချာ, parameters များကိုစွမ်းရည်များနှင့်အများကြီးပေးဆောင်ရသောလိင်, အရာပထဝီအနေအထား, အရာအသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်ငြာလိုက်သည်အားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်ခု option ကိုငါပေးမည်ဆိုပါက parameter သည်နှုန်းအဖြစ်အုပ်စုတစုကိုသတ်မှတ် - သငျကွီးဖွစျလိမျ့မညျမထင်ကြဘူး! ဟုတ်ကဲ့, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာလောကရှိလူအပေါင်းတို့ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်တယ်, ဒါယခုသင်, အလုပ်ကြိုးစားမှုသို့မဟုတ်စမတ်အလုပ်သင်ပြုသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုစဉ်းစားပါ။
သင်ယူမှုအားဖြင့်ဂိုးရဲ့အောင်မြင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆန်းသစ်သောနည်းပညာဖြေရှင်းချက်မှ။
ကျောင်းသားများ92017th ဘုတ်အဖွဲ့စာမေးပွဲများကိုသွားပြီးနောက်ပါသလားသင့်သ 12 အိုင်တီသင်တန်းများ